Cabsi laga qabo inuu joogsado Dhismaha jidka Muqdisho iyo Afgooye | Keydmedia
Cabsi laga qabo inuu joogsado Dhismaha jidka Muqdisho iyo Afgooye
Saraakiisha loo xil-saarey amniga ayaa sheegay inay jirto cabsida laga qabo suurtagalnimada ah in Al-Shabaab ay markale weeraro kusoo qaado shaqaalaha ku howlan mashruucan ay maal-gelinayso Qatar.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa tan iyo sanadkii tagey ay dowladda u maari la'dahay sugida amniga shaqaalaha Turkiga u dhashay ee dhisaya wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye, oo dhowr jeer weeraro Al-Shabaab kusoo qaadey.
Maalmo kahor, waxaa dib u billwdayday dhismaha wajiga saddexaad ee dhameytirka waddada, iyadoo la geeyay Ciidamo dheeraad ah oo loogu tala-galay inay ilaaliyaan shaqaalaha ajnabiga ah, oo qarka u saaran inay cabsi darteed shaqada u joojiyaan.
Labo Injineer oo Turkish ah ayaa lagu dilay qarax ka dhacay Ex-control Afgooye Dec. 2019, waxaana xigay weerar kale oo lagula eegtay isla shaqaalaha Turkiga xarun ay degmada Afgooye agteeda ku leeyihiin, halkaasina waxaa lagu dilay dhowr qof.
0 Comments Topics: turkiga wadada afgooye
Xarun Fiisaha Turkiga lagu bixin jiray oo musuq-maasuq loo xiray
Warar 2 September 2020 14:03
Markii uu Farmaajo xilka ka qaadey Khayre July 25, waxaa Xargaha goostay Musuq-maasuqii hay'adaha dowladda iyo xafiisyadii dadweynaha loogu adeegi jiray ee ku yaalla Muqdisho.
Ciidanka DF oo helay Gaadiid Gaashaaman
Warar 29 August 2020 15:27
Wasiiradda la riday oo saxiixaya heshiisyo dhaqaale ku raadinayaan
Warar 19 August 2020 16:23
Warar 12 August 2020 15:39